လက်ဖ၀ါးတွေပင့်မြှောက် မိုးပေါက်ကြားမှာ ကခုန်
ပြီးတော့… ငါတို့ ရယ်မောလိုက်ကြမယ်။
Posted by pandora at 10:14 PM
ကဗျာ လေးက ကောင်းတော့ ဝေဖန်ရမှာ အားနာတယ်။ ပညာညဏ် မမှီပါဘူး. ဖတ်ရုံပါဘဲ. ။ နားလည်သူများပြောကြပါ. ကိုယ်ကတော့ခံစားကြည့်ရုံ့ပါဘဲ
စွဲလမ်းမူ့ သည် အရင်းခံ ပေမယ့်......
စိတ်ထားဖြူစင်မူ့ ကပိုပြီး အထိက ကြမယ် ထင်တာဘဲ လေ..........
ကဗျာကို လာခံစား သွားပါတယ်။
ဒါကြောင်. excellent ပေးမိတယ်..
ပန်းချီရော၊ ကဗျာရော ကြိုက်တယ်။
ကဗျာ ဖတ်ရင်းနဲ့ ကိုယ်ကိုတိုင် မြက်ခင်းပြင်ပေါ်ထိုင်နေသလို လေညင်းလေးတိုးဝှေ့သွားသလို ခံစားရတယ်။
မြက်ခင်းပေါ်မှာ ခြေဗလာဆင်းနဲ့ ထိုင်မယ်ဆိုရင် သိပ်ကောင်းတာပေါ့။ နု နုလေး ဗျာ
ကဗျာကို မဝေဖန်ချင်ဘူး ညီမပန်ရေ .. ခံပဲခံစားချင်တယ် စီပုံးမရလို့မို့လို့
ခေါင်းစဉ်နဲ့ စကားလုံးလေးတွေနဲ့က နူးညံ့လွန်းလို့
ဖတ်ပြီးတော့ ချိုလိုက်တာ… ကြည်နူးလိုက်တာ…
ပြီးတော့… သူလုပ်ပေးတဲ့ စက္ကူပုတီးလေး တကုံးလောက်တောင် ဆွဲချင်စိတ်လေးပေါက်သွားအောင်
စက္ကူပုတီးလေးတွေ အများကြီး ထပ်ထပ်လုပ်ပေးနေမှာသေချာတာမို့ …
အချစ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးတလုံးမှ မပါပေမယ့်
ချစ်ခြင်းရနံ့ ထုံသင်းနေအောင် ရေးတတ်တာကိုက… ပန်ဒိုရာပဲပေါ့…
ပန်ဒိုရာကို မနာလိုတာတွေက အဲဒါတွေကြောင့်ပေါ့... :P
မခင်ဦးမေ... ဥာဏ်မမီဘူး ဆိုတာမရှိပါဘူးနော့။ နှလုံးသားတခုနဲ့သာ ဆင်းလာခဲ့ပါ။ :)
လင်းဒီပ... အသာလေး ဖတ်သွားလို့ ကျေးဇူးပါ။
ညိမ်းညို.... ရိုးရိုးလေးတွေကို ခံစားပေးနိုင်တာ ၀မ်းသာတယ်။
skyblue ... လုံးဝ သဘောတူပါတယ်။
ကိုဆောင်း.... တွေ့သွားတယ်ဆိုရင် ၀မ်းသာရမှာပေါ့။
နွေသူရ.... အမှတ်ပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ။
မီယာ.. အမြဲလာအားပေးတာ ကျေးဇူးနော်။
ကိုပေါ.. ပန်းချီက ပန်းချီမဟုတ်ဘူးဗျ။ ကိုယ်တိုင်ရိုက်တဲ့ ဓာတ်ပုံလေးကို effect နည်းနည်း ထည့်ထားတာပါ။
ယောနသံစင်ရော်... စိတ်နှစ်ပြီး ခံစားသွားတာ ပျော်စရာပေါ့နော်။
ဟန်လင်းထွန်း... မှတ်ချက်အတွက် ကျေးဇူးပါ။
မတူးတူးသာ... ဆီပုံးကတော့ ဖျက်ကောင်းဖျက်မယ်။ လာအားပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
mirror... မှန်ထဲက အရိပ်ပဲ. တို့သာတို့လိုက်ပေါ့.။
မတန်ခူးရေ.. နူးညံ့တဲ့ နှလုံးသားလေးနဲ့ ခံစားသွားတဲ့ မတန်ခူးရဲ့ မှတ်ချက်လေးကိုက ပိုနူးညံ့နေတော့တယ်။
ပီတိ.. မုဒိတာ ပွားပါကွယ်။။ :P
သိမ်မွေ့ တဲ့အင်ပရက်ရှင်ပန်းချီကားလေးကို
နောက် ကဗျာတွေလည်း စောင့်နေပါတယ်...။
ကဗျာလေးက ကောင်းတယ်ဗျာ... နေ့အလင်းကို ညချဉ်းကပ်လာရင်... အာရုဏ်တတ်ပြီလေ အစ်မရ... အဟတ်ဟတ်... အဆင်ပြေပါစေဗျာ...
ကိုဆူး... ပန်းချီလေးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်တဲ့ မှတ်ချက်ကို ကြားရတာ ပျော်သွားပါတယ်။ ဟုတ်တယ် တခါတခါ စာတွေက ပန်းချီအမျိုးအစားတွေလိုပဲ။
လွမ်းလုင်.. မှတ်ချက်အတွက် ကျေးဇူးပဲနော်။ ဟုတ်တယ်နော်။ အဲလိုလည်း အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားနိုင်တာပဲ.။ ကိုယ်ဆိုလိုတာက နေ့ပြီးမှ ရောက်လာတဲ့ ည။ :)
၅ စတား ပေးသွားတယ်....
စတားက ၅ လုံးထဲ ရှိတာကိုး...
အင်း လူ့ဘ၀ဆိုတာလည်း စက္ကူပုတီးလေးဆွဲပြီး မိုးရေထဲမှာ ကခုန်ရသလိုပါပဲ။ လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့ အရာတခုကို ကိုယ်မြတ်နိုးတန်ဘိုးထားရတာတွေနဲ့ ပေးဆပ်လဲလှယ်ယူလိုက်ရတာကလား။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ချမ်းမြေ့ပါစေဗျာ။ စီဘောက်ပိတ်ထားလို့ ဒီမှာ လာနှုတ်ဆက်သွားပါတယ်။ အခုတော့ ခရီးရှည်ကြီးတခုကနေ ပြန်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။
“ကြယ်ဖြူရိပ်မှာ လေညင်းချို” တဲ့ ဒီစာသားလေကို အခေါက်ခေါက်အခါခါ ဖတ်ကြည့်ရင်း ရင်ထဲအေးလာသလိုလို ခံစားရပါတယ်..
နုနယ်လှပသော စက္ကူပုတီးလေးအား မိုးပေါက်ကြားမှာ ကခုန်ရင်း နှလုံးသားဖြင့် ခံစားသွားပါကြောင်း...
ဒါပေမယ့် မပန်.. ဒီနေ့အခြေအနေကြီးကတော့ သိပ်မကောင်းဘူးထင်တယ်.. စာရေးချင်တယ် စာရေးချင်တယ်လို့ များများရွတ်ပေးလိုက်လေ. :P
အမ...ကဗျာလေးဆုံးသွားတော့...မျက်စိမှိတ်ပီး လွင့်မြောသွားလိုက်မိတယ်အမရာ...အမပြောချင်တာတွေအပြည့်အ၀နားမလည်ပေမဲ့...နားလညိသလောက်ကပဲ တနင့်တပိုးဖြစ်သွားတယ်...
ကိုအောင်သာငယ်... ကြယ်တွေ သိပ်များလည်း ကောင်းကင်နဲ့ မဆန့်ဖြစ်နေပါ့မယ်။
ကိုဝေလင်း.... ဒီလိုဆိုရင် တဖက်ကလည်း ကိုယ်တန်ဖိုးထားတာတွေကို မပျက်စီးသွားစေဖို့ လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့ အရာကို စတေးလိုက်ရမှာလားဟင်။
ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ်... အေးမြသွားစေတယ်ဆိုရင် ၀မ်းသာပါတယ်။
မသက်ဝေ... ခံစားသွားတာ ကျေးဇူးပါ။
နန်းညီရေ.... မရေးချင်ဖြစ်နေလည်း ရေးဖြစ်ပါပြီ။ :)
ဖိုးမောင်.. ပျော်ရွှင်နေတဲ့ တိမ်တိုက်တွေနဲ့ အတူဆိုရင် လွင့်မျောသွားတာ ကောင်းမှာပေါ့။
ကဗျာလေး ကောင်းလိုက်တာ မပန်
မလေး.. မလေးနှစ်သက်မယ့် ကဗျာမျိုးလို့ သတိရလိုက်ပါသေးတယ်။
အင်းးး စက္ကူပုတီးဆိုတော့ သဘာဝမြက်ခင်းတွေ လေညင်းတွေ သဘာဝအပျော်တွေနဲ့ ပိုလိုက်တာပေါ့..။
နောက်ထပ် တခုလည်း ခံစားမိတယ်.. အချစ်လို နူးညံ့တဲ့ ခံစားမှုမျိုးမှာ ငိုရတာကိုက ကြည်နူးရယ်မောစရာပဲလို့..။
(ပြီးတော့ ကပ်တီးကပ်ဖဲ့ ပြောရရင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုချစ်ရာလည်း ကျတာပေါ့နော်။:))
X'mas အကြို ပုံရိပ်များ
မုန်တိုင်းကြားက “ဘ၀” များသို့ (၂)
Creative Commons လိုင်စင်များ အလုပ်လုပ်ပုံ
ယခုမျှဝေ၊ အနာဂတ်ကို ပုံဖော်လေ
မူပိုင်ခွင့်၊ Creative Commons လိုင်စင်နှင့် မြန်မ...